February 12, 2018 – Arakan Times
February 12, 2018	Leaveacomment 216 Views
PRESS STATEMENT European Parliamentarians: Press Myanmar to Stop Violence and Ethnic Cleansing against the Rohingya [12 February 2018, Brussels] – On Mondayadelegation from the European Parliament will visit Myanmar and Bangladesh to discuss the Rohingya crisis. Commenting on the visit, Dr Anita Schug, Spokesperson of the European Rohingya Council said, “This isakey opportunity for EU officials ...
February 12, 2018	Leaveacomment 514 Views
AT Burmese 12 Feb 2018 မောင်တောမြို့၊ ကျီးကန်းပြင် နတလ ရခိုင် ကျေးရွာသားများ သီဟိုဠ်ကျွန်း ကျေးရွာ အုပ်စု ကာလီဇာဘင်္ဂါ အနောက်ရွာကျေးရွာရှိ ဗလီကြီးကို ဝင်ရောက်ကျူးကျော် ဖျက်ဆီးနေလျက်ရှိ။ ၂၀၁၇ ဩဂုတ်လတွင်၊ မောင်တောမြို့ ၊ နွားရုံတောင် ခေါ် (ဟော်ရော်ဒေလ်)ကျေးရွာရှိ ဗလီ ခြံဝင်းရှိ ၊ စာသင်ကျောင်းနှင့် ဝတ်ပြုဖိတ်ခေါ်ဆောင်အား နယ်ခြားစောင့်တပ်သားများ၊ စစ်သားများ ပူးပေါင်းကာ မီးရှို့ခဲ့ကြပါတယ်။ ယခုအခါတွင် အနီးရှိ ကျီးကန်းပြင် နတလကျေးရွာမှ ရခိုင် ရွာသားများလာရောက်ကာ ဗလီ ခြံဝင်းရှိ အပင်များများ ခုတ်ယူကာ ဗလီတွင်းထားကာ ထင်းခုတ်နေကြပါတယ်။ အပင်များခုတ်လှဲရာတွင် ဗလီဘက်သို့ကျရောက်မှုကြောင့် ဗလီ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများလည်းရှိနေပါတယ်။ အခုလို လုပ်ဆောင်နေသည်မှာ ၃ရက်ခန့် ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သော်လည်း မြန်မာအာဏာပိုင်ဖက်ကနေ ဟန့်တားခြင်းတစုံတရာမရှိပါ။ ထိုသို့ မလုပ်ရန်တောင်းဆိုသော ...
February 12, 2018	Leaveacomment 161 Views
For Immediate Release 12th February 2018 Myanmar’s Genocide of Rohingya Is Not Over: Rohingya Need UN-Protected Safe Zones Nayapara Camp, Cox’s Bazar, Bangladesh: The genocide of Rohingya in Myanmar is far from over, said the Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) aftera4-day fact finding trip to Cox’s Bazar, Bangladesh. “The evidence is mounting that the Myanmar military, led by ...